Undelete iPad: Undelete Xogta iPad 1/2/3/4/5
Undelete iPad: Undelete iyo Samatabbixinta Khasaaray Xogta iPad
> Resource > iPad > Undelete iPad: Undelete iyo Samatabbixinta Khasaaray Xogta iPad
Ma suurogalbaa in undelete xogta iPad?
On computer ah, waa u fududahay nagu qasi lahaa qaar ka mid ah hawlaha qaldan marka waxaa loo baahan yahay. Waxaad soo celin karaa dukumentigan oo ah tirtiray ka bin recycle ah, ama aad undelete karo waxyaabaha ka Kalimada, iyo waxyaabo la mid ah. Iyadoo ku iPad ah, waxaa suurtagal ah in undelete xogta ku yaal?
Guud ahaan, waxaad leedahay file gurmad ah haddii aad synced aad iPad la Lugood ka hor inta aanad la tirtiro xogta iPad. Haddii ay sidaa tahay, waxaad u soo celin kartaa xogta ka Lugood farta qoyan. Maxaa dhacaya haddii aadan haysan mid? Ama waxaad kaliya halmaamay in aan u hagaagsan aad iPad la Lugood iyo tirtirto xogta oo dhan? Waxaad u baahan tahay si aad u hesho ah iPad qalab undeleting xogta, aan ka ahayn Lugood.
Iyada oo ah iPad qalab undeleting xogta, waxaad si toos ah iskaan karaa in undelete xog ku saabsan iPad, oo aadan xataa haysan file ah oo gurmad ah. Waxaad isku dayi kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows iPhone Data Recovery) . Labada iyaga ka mid ah oo aad ha xogta undelete ka iPads la qasabno yar, oo ay ku jiraan xiriiro tirtiray, fariimaha, qoraalo, jadwalka taariikhda, wac gasho, xusuusinta iyo Bookmarks Safari. Wixii iPad 1, waxa kale oo aad undelete kartaa sawirro, video, cadaymaha cod, iwm
Download version maxkamad free hoose si aad u qaadato isku day ah.
Fiiro gaar ah: Si toos ah scan iPad in undelete xogta, version Windows iyo version Mac ah ee la heli karo iPad 1/2, iPad cusub, iPad bandhigay isha iyo iPad mini.
Next, aynu qaadan version Mac barnaamijka u leedahay in isku day ah. Haddii aad isticmaalayso Windows version ah, sidoo kale waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka hoose si aad xogta iPad undelete si la mid ah.
File Undelete on iPad 1/2, iPad cusub, iPad la isha & iPad mini
Tallaabada 1. Dooro habka soo kabasho
First of dhan, xiriiriyaan iPad si Mac la cable ah digital. Markaas ordi Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) iyo suuqa kala hoose ku tusi doonaa sida soo socota. Waxaa jira laba hababka soo kabashada Doorashadaada: kabsado Lugood ee kaabta File, oo ka soo kabsado Device macruufka. Waxaad u baahan tahay inaad halkan dooran hore, si ay u undelete files ka iPad.
Fiiro gaar ah: The dambe u fiican tahay soo saarida gurmad Lugood qalabka macruufka iyo eegista kabsaday xogta ka.
Waayo, kulli iPads, iPad 1 marka laga reebo:
Wixii iPad 1:
Tallaabada 2. Sawirka aad iPad in undelete xogta ka
Wixii iPad 1 isticmaala, waxaad u baahan tahay in la raaco sharaxaad ku saabsan suuqa kala kor ku xusan in ay marka hore soo galaan hab iskaanka ah, ka dibna waxa laga baarayo. Users kale iPad si toos ah riixi kartaa batoonka Start si ay u bilaabaan baar qalabka aad. Waqtiga sawiridda, ma barkinta aad iPad la Mac ah, ama baaritaan ku taag darnaan doono, oo aad u baahan tahay in aad mar kale sameeyo.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo file undelete ka iPad
Scan ka dib, waxaad ku eegaan kartaa dhammaan xogta laga helay on your iPad in natiijada scan. Click to iyaga ku eegaan mid mid. Xogta halkan ku cad waxaa ku jira kuwa weli jira on your iPad iyo kuwa tirtiray ka. Labada macluumaadka jira iyo xogta la tirtiro kasta waxay leeyihiin midab gaar ah. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto oo guji "Ladnaansho" in iPad files undelete aad Mac.
Si looga fogaado ka iPad badiyay xogta, ha xasuuso inaad si joogto ah dib u up on your computer.
Notes Undelete on iPad 1/2, iPad cusub, iPad la isha bandhigay & mini iPad
Top 5 kale oo ka mid ah VLC u iPad
Bedelka Videos hawada iPad in Computer si sahlan
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Safari Bookmarks on iPad
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Broken / Dead iPad
Qaababka Main si Play PowerPoint Presenations on iPad